Guusha Arsenal ee Tottenham oo Laga diiwaangeliyey Xaqiiqooyin iyo Taariikho u gooni ah | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Guusha Arsenal ee Tottenham oo Laga diiwaangeliyey Xaqiiqooyin iyo Taariikho u gooni...
Guusha Arsenal ee Tottenham oo Laga diiwaangeliyey Xaqiiqooyin iyo Taariikho u gooni ah
Kooxda Arsenal ayaa guul ka gaartay Kooxda Tottenham iyadoo dib u soo celisay heerkeeda Kubadeeda waxaa jira Xaqiiqooyin laga diiwaangaliyay Guusha Arsenal ee Caawa.
Arsenal ayaa diiwaangelisay guusheedii 600 -aad ee Premier League, waana kooxda seddexaad ee gaartay wadarta guud marka laga reebo Chelsea (601) iyo Manchester United (691).
Arsenal ayaa badisay 15 ka mid ah 28kii kulan ee Premier League ee 2021; afar dhinac oo kaliya ayaa intaas ka badan duubay. Runtii, tani waxay u dhigantaa wadar ahaan inta lagu guda jiro 2020 (15/34) iyo 2019 (15/38), markii ugu dambeysay oo ay guuleysato sanad kalandarka 2018 (19).
Tottenham ayaa ah kooxdii labaad ee taariikhda Premier League ee badisa seddexda kulan ee ugu horreeya hal xilli ciyaareed, ka dibna guuldarro la kulma seddaxda soo socota kaddib Everton 1993-94, oo ku dhameysatay kaalinta 17aad.
Spurs ayaa laga dhaliyay 3+ jeer seddex kulan oo isku xigta Premier League markii ugu horreysay tan iyo Sebtember 2003, markii la ceyriyay tababare Glenn Hoddle ka dib ciyaartii saddexaad.
Labada ciyaaryahan ee Arsenal Emile Smith Rowe (21 jir ah) iyo Bukayo Saka (20) ayaa is caawiyay shan jeer Premier League; labada ciyaaryahan ee da’doodu tahay 21 ama ka yar, kaliya Cristiano Ronaldo iyo Wayne Rooney (8) ayaa midba midka kale ka caawiyay taariikhda tartanka.
Previous articleArsenal oo 3-1 Ku garaacday Tottenham Ciyaar lagu kala baxay Qeybta hore
Next articleGALMUDUG oo war kasoo saartay duulaan la sheegay in uu kasoo socdo Ahlu-Sunna